Dhakhaatiirta safka hore uga jira dagaalka ka dhanka ah Caabuqa Corona ee dalka Talyaaniga ayaa sheegay inay kala dooranayaan bukaannada ay noloshooda badbaadinayaan iyo kuwa aysan badbaadineynin | Hubsad News
Dhakhaatiirta safka hore uga jira dagaalka ka dhanka ah Caabuqa Corona ee dalka Talyaaniga ayaa sheegay inay kala dooranayaan bukaannada ay noloshooda badbaadinayaan iyo kuwa aysan badbaadineynin
Xilli ay sii badanayaan dadka uu ku dhacayo cudurka, maalin walbana ay boqollaal qof kusoo biirayaan, Talyaaniga ayaa xaalad adag ku wajahaya sidii bukaannada loogu heli lahaa sariiraha isbitaallada oo ku filan – Xaaladdan ayaana lagu tilmaamay mid la arko xilliyada ay socdaan dagaallada lagu hoobto oo kaliya.
“Haddii qof ay da’diisu u dhaxeyso 80 ilaa 95 neefta ku dhaggantahay, uma badna inaad u dhaqaaqdo sidii aad u daweyn lahayd,” ayuu yiri Dr Christian Salaroli, oo madax ka ah qeybta bukaannada halista ah loo gudbiyo ee isbitaalka magaalada Bergamo ee ka tirsan gobolka waqooyiga Talyaaniga dhaca ee Lombardia, mar uu la hadlayay wargeyska Corriere della Sera.
“Erayadan waa kuwo aad u xun, laakiin waxaa wax laga qoomameeyo ah inay run yihiin. Ma fileyno inay dhacaan waxa aad ugu yeertaan mucjiso.”
Laakiin arrintani ma waxay khuseysaa Caabuqa Corona ee ku faafay Talyaaniga, taasoo micnaheedu tahay in go’aannada la xiriira nolosha iyo geerida ay lagama maarmaan yihiin?
Caabuqa Corona wuxuu si gaar ah dilaa uga noqday waddanka Talyaaniga – 1,000 dhimasho ayaa la diiwaan galiyay, halka tirada dadka uu ku dhacay ay marayaan 24,747 qof.
Image captionTirada dadka Caabuqa Corona ugu dhintay Talyaaniga waxay dhaafeen 1,000 qof
Waddankan ayaa ah kan labaad ee ay ku nool yihiin waayeellada ugu badan adduunka, marka laga soo tago kan koowaad oo ah Japan, sida laga soo xigtay Qaramada Midoobay.
Taasi micnaheedu waa in dadka da’da ah ay halis ugu jiraan inay aad u xanuunsadaan marka uu ku dhaco cudurkan.
Cudurka Corona oo Talyaaniga uga sii faafaya Qaaradda Yurub
Horaantii bishan, hay;ad dalka Talyaaniga u qaabilsan arrimaha gurmadka caafimaadka, oo magaceeda loo soo gaabiyo SIAARTI, ayaa soo saartay warbixin ay dhakhaatiirta uga digeyso inaysan isbitaallada ka heli karin sariiro ku filan oo bukaannada oo dhan lagu daweeyo.
Waxay hay’addan dhakhaatiirta kula talisay in halkii ay ugu adeegi lahaayeen bukaannada sida ay u kala horreeyaan, ay qaataan “go’aanno adag”, iyadoo xoogga saaraya bukaannada ay u maleynayaan inay si dhakhso ah u bogsan karaan haddii daweyn heer sare ah la siiyo.
“Arrintu ma aha in hay’adda SIAARTI ay soo jeedineyso in bukaannada qaar la daweeyo qaarna laga xannibo daweynta. Waa sidaas cagsigeeda, xaaladda taagan ayaa dhakhaatiirta ku kallifeysa inay diiradda saaraan daweynta bukaannada ay dawada wax u tareyso,” ayaa lagu yiri bayaanka kasoo baxay hay’adda.
‘Musiibo Sunaami ah’
Talyaaniga wuxuu leeyahay qiyaastii 5,200 oo sariiraha loogu talagalay bukaanka xaaladda halista ah ku jira, in badan oo ka mid ah sariirahanna waxaa horayba u buuxiyay bukaanno ay neefsashada dhibeyso.
Gobollada Waqooyiga ku yaalla ee Lombardy iyo Veneto waxay leeyihiin kaliya 1,800 oo sariiraha nooaas ah, oo ah marka la isku daro kuwa laga heli karo isbitaallada dowladda iyo kuwa sida gaarka ah loo leeyahayba.
Image captionIsbitaallada Waqooyiga Talyaaniga waxay sameeyeen dhismeyaal dheeraad ah, iyagoo isku dayaya inay sariiraha badiyaan
Dr Stefano Magnone, oo ka shaqeeya gobolka Lombardy, ayaa BBC-da u sheegay in ay gaarayaan meesha ugu dambeysa ee awooddooda ah.
“Xaaladdu way kasii dareysaa maalinba maalinta ka dambeysa, sababtoo ah waxaan kusii dhawaaneynaa halka ugu dambeysa ee ay gaarsiisan tahay tabarteenna dhinaca sariiraha loogu talagalay bukaannada xaaladdooda halista tahay, iyo sidoo kale qeybaha kale ee caadiga ahba, wayna sii adkaaneysaa in la daweeyo dadka uu ku dhacay Corona, maadaama ay tirada aad usii badaneyso,” ayuu yiri.
“Gobolkeenna wuxuu gabi ahaanba gaaray heer uusan waxba qaban karin, wayna naga soo xirmeen awoodihii dhinaca bani’aadanka iyo kuwa tiknoolojiyadda labadaba”.
Horaantii isbuucan, waxaa barta Twitter-ka si weyn ugu faaftay qirashadan uu sameeyay Dr Daniele Macchini, oo ah dhakhtar ka shaqeeya qeybta bukaannada halista ah ee loo yaqaanno ICU-da ee gobolka Bergamo.
Image captionMedical staff say their are under huge emotional pressure
Dr Salaroli wuxuu u sheegay wargeyska Corriere in shaqaalaha caafimaadka dareenkooda uu yahay “mid aad u naxdin badan” iyadoo qaar ka mid ah dhakhaatiirta la shaqeysana ay niyad jab weyn ka qaadeen go’aannada adag ee ay gaarayaan.
“Waxay arrintan qabsan kartaa Dhakhtar rug caddaa ah oo wax badan shaqeynayay iyo mid dhalinyaro ah hadda kusoo biiray shaqada labadaba, waxaana laga rabaa inay go’aan ka gaaraan wax ku xiran bani’aadannimadooda,”, ayuu yiri.
“Waxaan arkay kalkaaliyeyaal khibrad 30 sano ah leh oo oynaya iyo dhakhaatiir rug caddaayo ah oo jareynaya marka ay bukaannada la tacaalayaan.”
‘Codsiga uu Talyaaniga u dirsaday Yurub’
Wasiirka Arrimaha Dibadda ee Talyaaniga, Luigi Di Maio, oo la hadlayay BBC-da, ayaa ugu baaqay Yurub inay ugu deeqaan qalabka Isbitaallada.
Laakiin wuxuu sidoo kale muujinayay rajo wanaagsan, isagoo sheegay in ilaa hadda ay jiraan 10 magaalo oo ka tirsan Waqooyiga Talyaaniga oo uusan wali cudurka gaarin, kuwaasoo laga xayiray in la galo ama laga baxo.
“Talyaaniga waa waddankii ugu horreeyay ee ka tirsan Yurub oo uu saameeyay Caabuqa Corona,” ayuu yiri Di Maio. “Laakiin waxaan sidoo kale rajeynayaa in Talyaaniga uu noqdo waddanka ugu horreeya ee ka baxa xaaladdan halista ah”.